China Automatic Professional tube Laser tingcha Machine Manufacturer na Supplier | Guo Hong
Akpaka ọkachamara tube laser ọnwụ igwe bụ arụmọrụ dị elu, nkenke na ntụkwasị obi dị elu nke na-ejikọ njikwa kọmputa, nkenke nnyefe ntinye, na ịchacha ọkụ. Ezigbo igwe-igwe na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe ma dị mfe, ma nwee ike belata oghere dị iche iche ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Ọ na - akwado imewe ngwa ọrụ otu ngwa ngwa, nke na - adị ngwa ịwụnye ma dịkwa mfe ịkwaga.
Akpaka ọkachamara tube laser ọnwụ igwe
Full Automation, Naa Ọrụ Akwụ ụgwọ
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ, nchebe nchebe siri ike, arụmọrụ siri ike na ntụkwasị obi.
Ọkachamara Pneumatic Chucks abụọ
Ọdịmma dị elu: pịa bọtịnụ ka mwepu, na-akpaghị aka, 3 ugboro ngwa ngwa karịa nkedo eletriki; Ezigbo nkenke: nnukwu ike na-adịgide adịgide, enweghị ịmịcha tube, belata oke ziri ezi;
Nnukwu nkwụsi ike: nkwado pụrụ iche nke tube nwere ike izere ịmịpu sagging na nrụrụ, nke ziri ezi ma na-adịgide adịgide;
Cha Isi Pụrụ Iche maka Cutcha Mpekere
Pụrụ iche smart ọnwụ isi na-eme ka iche iche nke tube ọnwụ mfe;
Ekele maka mpempe akwụkwọ a rụpụtara, ọ dị mfe iji gbochie nkwekọrịta mgbe ị na-egbutu tubes dị nkọ;
Ntughari ohuru na anya nchedo, nchebe kacha mma maka ihe ndị bụ isi.
Ghọta nkewa nke nwere ọgụgụ isi, iri nri na enweghị ntụpọ na igwe na-egbutu eriri laser mgbe a na-etinye ngwungwu niile nke tubes na ngwaọrụ nri, ma hụ na ọ bụ naanị otu tube ka a na-enyefe na ogwe aka na-enyefe oge ọ bụla.
Akpaghị aka na-ebudata
Emechara ngwaahịa a na-akpaghị aka na-ama esịn nchekwa biini, abụọ support-agba inyeaka nkwado overlong akpa.
Efere ịgbado ọkụ bed imewe
Ihe ndina ahụ na-agbaso usoro mgbatị profaịlụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na nyocha nke CAE nyochara ma nyochaa ya. A na-eji mkpuchi okpomọkụ dị elu na ịka nká iji kpochapụ nrụgide ịgbado ọkụ, gbochie nrụrụ, belata vibration, ma hụ na ịchacha ihe ziri ezi
Ngwaọrụ igwe GHJG-F6020T
Cha dayameta nke gburugburu tube 20-200mm
Cha dayameta nke square tube 20 * 20mm-150 * 150mm
Max. Mgbagharị Ọsọ 100m / min
Ọsọ ọsọ 1G
Na ọdabara ike 1000W-60000W
1. Nwere ike belata akara na oghere nwere diameters dị iche iche site na ntụpọ dị iche iche na ọkpọkọ ahụ, wee zute ọnọdụ nhụjuanya ntanetị na nke na-abụghị nke centrifugal maka ngalaba na isi ọkpọkọ.
2. Nwere ike belata Lines Crossed Lines na njedebe nke ọkpọkọ alaka, wee zute ọnọdụ nkwụsị na ntanetị na nke na-abụghị nke centrifugal maka ngalaba na isi ọkpọkọ.
3. Nwere ike igbutu ngalaba a na-eche ihu na ngalaba ngwụcha nke ọkpọkọ ahụ.
4. Nwere ike belata ọkpọkọ alaka jikọtara ya na okirikiri okirikiri isi.
5. Nwere ike wedata mgbanwe n'akuku bevel elu
6. Nwere ike igbutu oghere nwere oghere, oghere nwere ukwu-ukwu na oghere okirikiri na ọkpọkọ.
7. Nwere ike ịkụcha ọkpọkọ.
8. Nwere ike igbutu ụdị eserese dị iche iche n’elu ọkpọkọ square.
Nke gara aga: Tube Fiber Laser tingcha Machine
Osote: Hand-ẹkenịmde Laser ịgbado ọkụ Machine
2kw eriri laser ịcha igwe
igwe akụrụngwa akụrụngwa
akpaka ọkachamara tube laser ịcha igwe
ọnụahịa ọnụahịa laser metal
cnc pipe laser ịcha igwe
eriri laser ịcha ngwá
eriri optic laser ọnwụ igwe
eriri optic tube cutter
metal tube laser ịcha igwe
square tube ọnwụ igwe
Single Platform efere na tube Laser tingcha Ma ...
Nrụgide oru tube Laser tingcha Machine